Umlilo ushiye abahlali bengodingi-ndawo e Phillipi – Elitsha
Umlilo ushiye abahlali bengodingi-ndawo e Phillipi
15th November 2017 Phinda KulaCape Town, Iyavela, Oorhulemente basemakhaya 0 Xhosa
Abahlali base Phantsi ko Cingo bekhangela okuseleyo kumlilo ogqugqisileyo kulendawo yamatyotyombe. Imifanekiso ngu Phinda Kula
Philippi Village, Cape Town, South Africa
Aqikelelwa ngaphaya kwekhulu amatyotyombe athe agutyungelwe ngumlilo kwindawo yogobityholo iPhantsi koCingo kummandla wasePhilippi e Kapa.
Abahlali abachaphezelekileyo sele beqalisile ukucoca ngelizama ukubuyisela imeko esiqhelweni. Lomlilo uqale emva kwentsimbi yeshumi nge Cawe nalapho izicima-mlilo ziqubisene nawo de kwayintsimbi yeshumi elinesibini ngentseni yangoMvulo. Kulomlilo kubhubhe umntu wamnye.
Ixhoba yindoda enamashumi amathathu anesibini emoinyaka ubudala. Othethela ilungu losapho umnumzana Mnoneleli Lennox Nikani uthi umtshana wakhe uphulukene nobom ngethuba ebezama ukukhupha isikhencezisi sakhe nothe wanelishwa wagutyungelwa ngumlilo akakwazi ukuphuma. Lendoda ishiya inkosikazi yayo nomontwana oneminyaka emithathu ubudala.
Lomlilo uqale ngokutsha ityotyombe elinye nalapho abahlali bebekwazi ukuwuthintela ungabangeli umonakalo kwamanye amatyotyombe. Abahlali kulendawo bagxumeka iintente ngomnyaka ka2003. Le yindawo ephantsi kobu xhakaxhaka bentambo neepali ezinde zombane.
Amaxhoba adiza ukuba umoya ububhudla ubenegalelo kumlilo othe wagqugqisa kulangingqi.
Omnye kubahlali unkosikazi Ntombebandla Mandoyi uthi ushiyeke ngemaphala azinxibileyo nadiza ukuba impahla zendlu zitshele ngaphakathi ngelithi utshixe umnyango wasindisa kuphela ubomi bakhe nomntwana wakhe oneminyaka emithandathu. Lenkosikazi nenamashumi amane nasithathu eminyaka ubudala ithi iziva ikhathazekile kodwa oyena mntu ungxunguphele ngakumbi ngumntwana wakhe kuba ebecela indawo yokuhlala esoyika amalangatye omlilo nombongeze ukuba bangabuyeli kulendawo.
Onguceba kulangingqi kwaWard 80 umnumzana uNkululeko Mgolombane uthi sele kuyiminyaka bezama ukuthetha-thethana nesixeko saseKapa ukuba bafuduswe abahlali kulandawo kuba kunzima ukuba iphuhliseke. Uthi umasipala ukhala ngokungabikho ndawo angabafudusela kuyo aba bahlali, kulendawo akukho mbane, amanzi kunye nezindlu zangasese.
LokaMgolombane uthi ikhona imali ebelekelwe bucala ukuphuhlisa lendawo. Uthi le yimali engamakhulu amane anamashumi amathandathu amawaka erandi ( R460 000). Amagosa enkonzo zentlekele eKapa sele eqalisile ukuhlola lengingqi ngelizama ukuqwalasela ubungakanani bomonakalo kwanenani elililo lamatyotyombe kwanabantu abachaphazelekileyo. Unobangela walomlilo awukazikwa nanjengoko kudizwa ukuba uqale kumgangatho ongasentla kwelinye lamatyotyombe. Amaxhoba ecele indawo zokufhla iintloko kwizihlobo nakubamelwano nanjengoko behlala kude neholo yoluntu kulangingqi. Ukanti abahlali bacela nokuba luncedo oluvela ngaphi kuba abanako nokusiwa phantsi kwempumlo.
Also read: Bahlala ngoloyiko abahlali baseMarikana
Igqogqisile imililo kwisixeko seKapa
Abantwana babhenela kumaqula ongqongopheleyo eKapa